Bit By Bit - Ịmepụta mmekọrịta ọnụ - 5.3.1 Netflix Nrite
Ọrụ a na-akpọghe oghe mara amara nke ọma bụ Netflix Prize. Netflix bụ ụlọ ọrụ na-ere ihe nkiri n'ịntanetị, na 2000, ọ na-akwalite Cinematch, ọrụ iji kwado ihe nkiri ndị ahịa. Dịka ọmụmaatụ, Cinematch nwere ike ịhụ na ị nwere mmasị na Star Wars na The Empire Strikes Back ma kwezie ka ị na -eleghachi azụ nke Jedi . Ná mmalite, Cinematch rụrụ arụ. Ma, n'ime ọtụtụ afọ, ọ nọgidere na-emeziwanye ike ya ịkọ ihe fim ndị ahịa ga-enweta. Otú ọ dị, site na 2006, ọganihu na Cinematch nwere ala ọma jijiji. Ndị na-eme nchọpụta na Netflix agbalịwo nnọọ ihe niile ha nwere ike iche, ma, n'otu oge ahụ, ha chere na e nwere echiche ndị ọzọ nwere ike inyere ha aka imezi usoro ha. N'ihi ya, ha bịara na ihe dị n'oge ahụ, ihe ngwọta siri ike: oku na-emeghe.
Nchịkọta maka ihe ịga nke ọma nke Netflix Prize bụ otú e si akpọ oku a na-emeghe, nke a na-enwekwa ihe dị mkpa maka ịkpọghe oku nwere ike iji mee nnyocha maka mmadụ. Netflix abụghị nanị ịchọta rịọ arịrịọ na-adịghị edozi maka echiche, nke bụ ihe ọtụtụ ndị na-eche mgbe mbụ ha na-atụle oku na-emeghe. Kama nke ahụ, Netflix nwere nsogbu doro anya na usoro nyocha dị mfe: ha gbara ndị mmadụ aka ka ha jiri otu ihe ruru 100 nde ihe nkiri fim maka ịkọtara nde mmadụ atọ maka njedebe (ọkwa nke ndị ọrụ mere ma Netflix ahapụghị). Onye mbụ nke mepụtara algọridim nke buru amụma na nde 3 ndegoro 10% karịa Cinematch ga-emeri otu nde dollar. Nke a doro anya ma dị mfe itinye usoro nyocha-iji atụnyere ntụrụndụ ndị a na-atụle na Fim na-echere - pụtara na ntinye Netflix nwetara n'ụzọ dị otú a na ọ dị mfe ịlele nyocha karịa nhazi; ọ gbanwere ihe ịma aka nke imeziwanye Ụlọ Ntinye ahụ ka ọ bụrụ nsogbu kwesịrị ekwesị maka oku na-emeghe.
N'October nke afọ 2006, Netflix wepụtara dataset nwere ihe ruru nde 100 site na ihe dị ka ndị ahịa 500,000 (anyị ga-atụle ihe nzuzo nke ntinye data a na isi 6). A na-echekwa data Netflix dị ka nnukwu edemede nke dị ihe dị ka ndị ahịa 500,000 site na fim iri abụọ. N'ime ihe ọmụmụ a, e nwere ihe dị ka 100 nde Fim na ọnụ ọgụgụ sitere n'otu kpakpando ise ruo ise (tebụl 5.2). Ihe ịma aka a bụ iji data ahụ edepụtara na matrik ahụ ka ịkọwa ihe ruru nde atọ maka njedebe.
Isiokwu 5.2: Usoro nke Data sitere na Nrite Netflix
Ahịa 1 2 5 ... ?
Ahịa 2 2 ? ... 3
Ahịa 3 ? 2 ...
Ndị ahịa 500,000 ? 2 ... 1
Ndị ọkachamara na ndị na-eme nchọpụta gburugburu ụwa nabatara ihe ịma aka, na 2008, ihe karịrị mmadụ 30,000 na-arụ ọrụ na ya (Thompson 2008) . N'ime asọmpi ahụ, Netflix natara ihe karịrị 40,000 ngwọta nke ihe karịrị puku ise (Netflix 2009) . N'ụzọ doro anya, Netflix apụghị ịgụ ma ghọta ihe ngwọta a niile. Ihe niile na-aga nke ọma, Otú ọ dị, n'ihi na ngwọta dị mfe ịlele. Netflix nwere ike ịnwe kọmputa jiri Mmasị ndị a na-atụ aro ya na Fim ndị a na-eji eme ihe na-eji ọnụọgụ nrụpụtara (ụdị metric ahụ ha ji mee ihe bụ mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ nke njehie squared). Ọ bụ ikike a ngwa ngwa nyochaa ngwọta nke nyeere Netflix aka ịnweta ngwọta site na onye ọ bụla, nke mere ka ọ dị mkpa n'ihi na ezi echiche sitere na ebe ụfọdụ dị ịtụnanya. Nke bụ eziokwu bụ na otu ndị na-eme nchọpụta nke atọ ndị na-enwebeghị usoro nkwupụta ihe nkiri (Bell, Koren, and Volinsky 2010) .
Otu akụkụ mara mma nke Nrite Netflix bụ na ọ na-eme ka ihe ngwọta niile a chọrọ ka a nyochaa. Nke ahụ bụ, mgbe ndị mmadụ bulitere ọkwa ha na-atụghị anya ha, ọ dịghị mkpa ka ha bulie ha nzere ihe ọmụmụ, afọ ha, agbụrụ, okike, ọnọdụ mmekọahụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla gbasara onwe ha. A na-emeso ọkwa nke a ma ama nke prọfesọ a ma ama na Stanford kpọmkwem dị ka ndị sitere na nwata nọ n'ime ime ụlọ ya. O di nwute, nke a abughi eziokwu n'onu nyocha ndi mmadu. Nke ahụ bụ, maka ọtụtụ nchọpụta ọha na eze, nnyocha dị oke oge na ihe dị na ya. Ya mere, ọtụtụ nchọpụta nchọpụta adịghị echebara echiche nke ọma, mgbe a na-enyocha echiche, ọ na-esiri ike iwepụ nyocha ndị ahụ sitere n'aka onye okike nke echiche. N'aka nke ọzọ, ọrụ imeghe ọrụ, nwere nyocha dị mfe ma dị mma ka ha nwee ike ịchọpụta echiche ndị a ga-efu ma ọ bụghị.
Dịka ọmụmaatụ, n'otu oge n'oge Netflix Prize, onye nwere ihuenyo aha ya bụ Simon Funk kwupụtara na nchịkọta akụkọ ya ihe ngwọta dabere na njedebe dị oké ọnụ, nke sitere na linear algebra nke ndị na-esonyereghị na mbụ. Funk's blog post bụ n'out oge nkà na ụzụ na nke dị omimi. Ndi blog a na-akọwa ezigbo ngwọta ma ọ bụ na ọ bụ oge efu? N'èzí ọrụ mmeghe na-emeghe, ihe ngwọta ahụ agaraghị enweta nyocha dị oke mkpa. E kwuwerị, Simon Funk abụghị prọfesọ na MIT; ọ bụ onye nrụpụta ngwanrọ bụ onye, ​​n'oge ahụ, nọ na azụ azụ na New Zealand (Piatetsky 2007) . Ọ bụrụ na o tinyela echiche a maka onye injinia na Netflix, ọ ga-abụ na ọ gụbeghị.
Ọ dị mma, n'ihi na njiri nyocha ahụ doro anya ma dị mfe itinye ya n'ọrụ, a na-enyocha ihe ndị a na-atụ anya ya, ọ ga-edozikwa ozugbo na ụzọ ya dị ike: ọ na-eme ka ọ bụrụ ebe anọ na asọmpi ahụ, nnukwu ihe kpatara ya bụ na ndị ọzọ na-arụ ọrụ ruo ọtụtụ ọnwa na nsogbu ahụ. N'ikpeazụ, ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile na-asọmpi (Bell, Koren, and Volinsky 2010) esote akụkụ ya.
Eziokwu ahụ bụ na Simon Funk họọrọ ide ederede blog na-akọwa ụzọ ya, kama ịnwa imechi ya, na-egosikwa na ọtụtụ ndị na-etinye aka na Netflix Prize abụghị nanị kpalie ihe nde dollar. Kama nke ahụ, ọtụtụ ndị na-agụ ya yiri ka ọ na-enwe ọganihu ọgụgụ isi na obodo nke mepụtara gburugburu nsogbu (Thompson 2008) , mmetụta m na-atụ anya na ọtụtụ ndị nchọpụta nwere ike ịghọta.
The Netflix Prize bụ ihe atụ zuru oke nke oku na-emeghe. Netflix jụrụ ajụjụ na otu ihe mgbaru ọsọ (na-ekwu maka fim maka fim) ma rịọ ka ọtụtụ ndị nweta ngwọta. Netflix nwere ike inyocha ihe ngwọta ndị a n'ihi na ọ dị mfe ịlele karịa ịmepụta, n'ikpeazụ Netflix ahọrọ ihe ngwọta kacha mma. Ọzọ, m ga-egosi gị otu a ga-esi jiri otu usoro a mee ihe na usoro ndu na iwu, na-enweghị ihe nde dollar.